ဇာတ်ကားတွေကို စီစဉ်ပြီး ရိုက်ကူးခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ အိန္ဒိယမင်းသမီး Sridevi ⋆ Popular
ဇာတ်ကားတွေကို စီစဉ်ပြီး ရိုက်ကူးခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ အိန္ဒိယမင်းသမီး Sridevi
July 18, 2017 Leanne Win
ဇာတ်ကား ရိုက်ကူးလာတဲ့ တစ်လျှောက် ဒါရိုက်တာ ရွေးချယ်ပေး တဲ့ ကာရိုက်တာတွေကို ရိုက်ကူးခဲ့သူ Sridevi ကသူမရဲ့ဇာတ်ကား ရွေးချယ်မှုတွေ ပတ်သက်ပြီး “စိန်ခေါ်မှု တစ်ခုပါဝင်တဲ့ ကာရိုက်တာတွေ ကို အမြဲ စိတ်ဝင်တစား လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ ဇာတ်ကားတစ်ကားကို လက်ခံလိုက်ပြီဆိုတာက ကျွန်မရဲ့ရွေးချယ်မှု မဟုတ်ပါဘူး။ အခွင့် အရေးကို လက်ခံ လိုက်တာပါ။ ရိုက်ကူးခဲ့သမျှ အားလုံး ကလည်း အခုလိုပါပဲ။ စီစဉ်ထားတာမရှိဘဲ ရိုက်ကူး ခဲ့တာချည်းပဲ။ ဒါရိုက်တာက ကျွန်မရိုက်ကူးဖို့ ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ ဇာတ်ကားကို ကျွန်မ ငြင်း ပယ်ဖို့ မရှိပါဘူး”လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ မင်းသမီးက အခုတော့ အမေခန်း တွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေ ပြီး ပရိသတ်တွေကလည်း လက်ခံအားပေး ကြိုက် နှစ်သက်ကြပါတယ်။
သီချင်းအသစ်တွေ ဖန်တီးနေတဲ့ Pharrell Williams
မွေးနေ့မှာ ပြန်လည်ဆုံတွေကြတဲ့ Ashley Tisdale နဲ့ Vanessa Hudgens
Norris Gettinger4months ago
Do you want to submit your ad on thousands of advertising sites every month? One tiny investment every month will get you virtually unlimited traffic to your site forever!Get more info by visiting: http://lotsofadsposted4u.dealz.site
Melaine Alleyne4months ago
Would you like to post your business on thousands of advertising sites every month? Pay one low monthly fee and get virtually unlimited traffic to your site forever!To find out more check out our site here: http://moreadsposted.n3t.store
ရက်ပါဒရိတ်က မက်ဒေါ်နယ်လ်ဆိုင်က ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီး နှစ်ဦးကို မုန့်ဖိုးပေးတဲ့ ကိစ္စ အငြင်းပွားဖွယ် ဖြစ်နေ
သီချင်းတွေတွဲလုပ်ဖို့စီစဉ်နေတဲ့ Dara နဲ့Minzy
အရင်လို ခန့်ညားနေဆဲမင်းသားWon Bin